Maniac Cop 2 sy 3 dia mankany amin'ny 4K UHD - iHorror
Home 4K UHD Maniac Cop 2 sy 3 dia mitodika any amin'ny 4K UHD
Maniac Cop 2 sy 3 dia mitodika any amin'ny 4K UHD
Avy amin'ny Blue Underground ity ary manao asa mahatalanjona izy ireo
by Trey Hilburn III Oktobra 21, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 21, 2021 301 hevitra
Bill Lustig's Blue Underground dia niasa tamin'ny famoahana ny taratra blu-ray tiako indrindra tato anatin'ny roa taona. Ny tolotra farany natolotr'izy ireo dia ho an'ny Bill Lustig notarihina Maniac Cop 2 ary ny Alan Smithee no nitantana Maniac Cop 3.
Ny synopsis ho an'ny Maniac Cop 2 mandeha toy izao:
Niverina tamin'ny maty ny “Maniac Cop” ary nanenjika ny araben'i New York indray. Maherifo ny manamboninahitra Matt Cordell taloha, saingy taorian'ny nanorenany ireo lehiben'ny kolikoly ary notafihana an-kerisetra tany am-ponja, dia nanao iraka hamaly faty izy, niara-niasa tamina mpamono olona mahatsiravina mba hanara-maso ireo nanisy ratsy azy ary hanome vola azy ireo… amin'ny fiainany!
Tena mieritreritra izany aho Maniac Cop 2 no tsara indrindra amin'ny andiany. Nahazo faharesena mihoatra ny natiora fotsiny izy io mba hanaovana fipoahana tanteraka.
Ny endri-javatra manokana Maniac Cop 2 ho an'ny sarimihetsika roa dia rava toy izao:
Kapila 1 (4K UHD Blu-ray) Sarimihetsika + Fanampiny:
Fanehoan-kevitra Audio miaraka amin'ny Tale William Lustig sy Mpanamboatra Film Nicolas Winding Refn
Disc 2 (Blu-ray) Film mihetsika + Extras:
Miverina amin'ny Beat - Ny fanaovana MANIAC COP 2
Cinefamily Q&A miaraka amin'ny Tale William Lustig
Nesorina ny seho
Poster & Galerie mbola
VAOVAO! Fanamarihana Audio miaraka amin'ny talen'ny Alan Smithee
Sandry diso amin'ny lalàna - Ny fanaovana MANIAC COP 3
Seho voafafa sy nitarina
Famintinana tany am-boalohany
Toy ny mahazatra, ny laharan'ny endri-javatra bonus dia mitovy amin'ny zavatra natolotry ny Blue Underground tamin'ny famoaham-baovao tsara tarehy teo aloha.
Maniac Cop 2 sy 3 dia vokatry ny fivarotana voafitaka manomboka amin'ny 16 Novambra ETO hametrahana ny pre-order anao.